ခရီးသွားနှစ်သက်တဲ့ ကိုကိုတို့အတွက် Acqua Di Parma ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Colonia Nomade Set! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ခရီးသွားနှစ်သက်တဲ့ ကိုကိုတို့အတွက် Acqua Di Parma ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Colonia Nomade Set!
ခရီးသွားနှစ်သက်တဲ့ ကိုကိုတို့အတွက် Acqua Di Parma ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Colonia Nomade Set!
အသားအရေကို ကိုကိုတွေပါ ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးမှာ ပျိုပျိုတွေသာမကပဲ ကိုကိုတွေပါ အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ Personal Grooming နဲ့ Personal Hygiene ကလည်း အရေးကြီး တဲ့ အပိုင်းအနေနဲ့ ပါဝင်လာတာကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပေါ့။ ကိုကိုတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ Acqua Di Parma ကနေ သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး အသုံးတည့်တဲ့ Travel set လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဒီ Travel Set လေးမှာ 75ml After Shave Balm, 75ml Bath and Shower Gel နဲ့ 50ml Deodorant Spray တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Shave Balm ဟာလည်း Shave လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း အသားအရေ ကြမ်းတမ်းပြီး ပျက်စီးလာခြင်းမျိုးမှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ပေးထားတာကြောင့် ပြစ်ချက်ကင်းမဲ့ပြီး ချောမွေ့တဲ့အသားအရေကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ။ Hyaluronic Acid ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် သင်တုန်းဓား ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ပြန်လည်အသက်ဝင်စေပါတယ်။ နူးညံ့စေရုံသာမဟုတ်ပဲ အသားအရေကို သန့်ရှင်းပြီး မွှေးကြိုင်စေမှာပါ။
Bath & Shower Gel ဟာလည်း အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းတာကြောင့် အလွယ်တကူ ရေနဲ့ ရောစပ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြေးညှော်တွေကို တခဏချင်း ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့် ကိုကိုတို့ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ Panthenol နဲ့ marine trace elements တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေကိုလည်း ပြန်လည်ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ မနက်တကြိမ်အသုံးပြုပြီးရုံနဲ့တင် တနေကုန် လန်းဆန်းနေစေမှာဖြစ်တာကြောင့် ကိုကိုတို့ အတွက် Perfect ပဲပေါ့။
ချွေးထွက်များတဲ့ ကိုကိုတွေအတွက် အသုံးတည့်မယ့် Deodorant Spray လည်းပါဝင်တာကြောင့် တနေကုန် မလန်းဆန်းမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ပေါင် ၄၂ ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူလိုတယ်ဆိုရင် UK Branded Online shop တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.acquadiparma.com
Photoshop လုပ်လိုက်သလို ချက်ချင်း ဆံပင်အရောင်ပြောင်းသွားစေမယ့် Hush hush ရဲ့ Prism Airbrush Spray